September 3, 2021 - Celegroup
လူ ႏွင့္ သူ၏ စိတ္ကူးယဥ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အေၾကာင္း
September 3, 2021 cele group 0
လူ ႏွင့္ သူ၏ စိတ္ကူးယဥ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အေၾကာင္း ေမြးကတည္းက မ်က္စိ မျမင္ရတဲ့သူဟာ အိပ္မက္ လုံးဝ မမက္ပါဖူး။ သူဟာ အစကတည္းက Visual Input မရွိတဲ့ အတြက္ အိပ္မက္ဆိုတဲ့ Brain ထဲမွာ Virtual Reality Stimulation ဆန္ဆန္ေတြ မျဖစ္ပါဘူး။ထိုနည္းတူစြာ ေမြးကတည္းက နားမၾကားတဲ့ စြံ့အနာမၾကားတဲ့သူဟာ အမ်ားသူငါျဖစ္တဲ့ သရဲပူးျခင္း – သေစၧပူးျခင္း – နတ္ပူးျခင္း […]
မိန္းကေလးေတြ မႀကိဳက္တဲ့ အမွန္တရား နည္းနည္းေတာ့ ခါးမယ္ ဖတ္ၾကည့္… ေယာကၤ်ားေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အမ်ားေပ်ာ္ေအာင္ Facebook မွာျဖစ္ျဖစ္ အျပင္မွာ သူငယ္ခ်င္းဆုံရင္ျဖစ္ျဖစ္ လုလုေအာင္ေဟ့ !!! မေအးေသာင္းေဟ့ !!!စသျဖင့္ ရီစရာေတြေရးတင္ ဟာသေတြလုပ္ၿပီး Troll ေနၾကတာ… တကယ့္အျပင္ေလာကမွာေတာ့ လုလုေအာင္ မေအးေသာင္း ဆိုရင္ ဘယ္ေကာင္မွ ဘာမွကို မခံစားရတာဗ်။ (တကယ္ေျပာတာ ဘာမွကို မခံစားရပါ) ဒါ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ဂုဏ္တင္ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ေယာက္က်ားအမ်ားစု ( […]
အစားအစာပို႔ေဆာင္သူ ဝန္ထမ္းမေလးမွာ ေပါင္တံရွည္ေလးႏွင့္ ခ်စ္စရာေကာင္းေနတာေၾကာင့္ စုံစမ္းၾကည့္လိုက္ရာ သ႐ုပ္မွန္ကိုသိရွိၿပီးေနာက္ ေၾကကြဲသြားခဲ့ရသည့္အျဖစ္…
အစားအစာပို့ဆောင်သူ ဝန်ထမ်းမလေးမှာ ပေါင်တံရှည်လေးနှင့် ချစ်စရာကောင်းနေတာကြောင့် စုံစမ်းကြည့်လိုက်ရာ သရုပ်မှန်ကိုသိရှိပြီးနောက် ကြေကွဲသွားခဲ့ရသည့်အဖြစ်… ယနေ့ခေတ်တွင် အစားအသောက်များကို အိမ်တိုင်ရောက်စနစ်ဖြင့် အများအပြားကျင့်သုံးလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ဟောင်ကောင်မှ Food Panda delivery ဝန်ထမ်း မိန်းကလေးသည် သေးသွယ်သော ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ချစ်စရာကောင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အလှတရားတို့ကြောင့် ဝယ်ယူသူဖောက်သည်အမျိုးသားများကြားတွင် အတော်လေးရေပန်းစားခဲ့သည်။ အစားအစာပို့ဆောင်ရေး မိန်းကလေးသည် Sexyကျသော အဝတ်အစားများကို ဝတ်ထားပြီး လိုင်းပေါ်တွင်လည်း ဆယ်ဖီပုံများအမြဲကိုက်ပြီးတင်လေ့ရှိရာ ကောင်လေးတွေရဲ့ အချစ်တွေကို မြန်ဆန်စွာ […]
အော်တို ဂီယာကားမောင်းသူများ ဂီယာဘောက်အကြီးစားပြင်ဆင်မှု မဖြစ်စေဖို့ သတိထားသင့်တဲ့ အချက် (၅) ချက်
အော်တို ဂီယာကားမောင်းသူများ ဂီယာဘောက်အကြီးစားပြင်ဆင်မှု မဖြစ်စေဖို့ သတိထားသင့်တဲ့ အချက် (၅) ချက် ၁။ auto gear က Parking (P) ကိုထိုးတော့မယ်ဆိုရင် ကားကိုလုံးဝဘရိတ်နင်းပြီးရပ်သွားမှ ထိုးပါ။ P ကိုထိုးလိုက်တာနဲ့ transmission ကို သော့ခတ်လိုက်သလိုပါပဲ။ locking pin လို့ခေါ်တဲ့ သံချောင်းဟာ transmission က ဂီယာအသွားတွေကြားထဲ ထိုးပိတ်လိုက်ပါတယ်။ ကားမရပ်သေးဘဲ P ထိုးလိုက်ရင် အဲ့ lock […]
အင်္ဂလိပ်တွေ ဆယ်ယူလို့မရခဲ့တဲ့ စဉ့်ကူးမင်းခေါင်းလောင်းကြီးကို မြန်တွေ ဘယ်လို ဆယ်ယူခဲ့ကြလဲ
စဉ့်ကူးမင်းခေါင်းလောင်းအား အလောင်းမင်းတရားကြီ၏ ဒုတိယမြောက်သားတော် ဆင်ဖြူရှင်မင်းက ပန်းတည်းဝန် ပညာဒေ၀ ကို သွန်းလုပ်ရန် တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သွန်းလုပ်နေဆဲအချိန်မှာပင် ဆင်ဖြူရှင်မင်း နတ်ရွာစံခဲ့ပါတယ်။ဆင်ဖြူရှင်မင်း၏ အရိုက်အရာအား သားတော် စဉ့်ကူးမင်းက ဆက်ခံခဲ့ပြီး ခေါင်းလောင်းကြီးအား ဆက်လက်သွန်းလုပ်စေခဲ့ပါတယ်။ စဉ့်ကူးမင်းသည် ရွှေတိဂုံစေတီကို အလှူအမျိုးမျိုးပြုခဲ့ရာတွင် ခေါင်းလောင်းကြီးလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။မဟာဃဏ္ဍဘွဲ့ပေးကာ ရွှေတိဂုံစေတီ၏ အနောက်မြောက်ဖက်တွင် တန်ဆောင်းနှင့် တကွ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ စဉ့်ကူးမင်းခေါင်းလောင်း၏ အလေးချိန်မှာ ၁၅၅၅၅ ပိဿရှိပြီး တန်ချိန်အားဖြင့် ၂၄ တန်လေးပါတယ်။ အရှည် […]
သင့်ကိုချမ်းသာစေနိုင်သည့် နည်းလမ်း(၁၆)ချက် ၁။ ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းများဖြင့် အသက်ရှင်နေထိုင်ပါ။ ၂။ လောင်းကစားမလုပ်ပါနဲ့။ ၃။ နေ့စဉ်စာဖတ်ပါ။ ၄။ မလိုအပ်ဘဲ Facebook သုံးနေတဲ့အချိန်တွေကို လျော့ချပါ။ ၅။ စိတ်ခံစားချက်များကို ထိန်းချူပ်ပါ။ ၆။ ကောင်းမွန်တဲ့ အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေများရှာဖွေပါ။ပုံမှန် စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ပါ။ ၇။ အလုပ် နှင့် စီးပွားရေးထက် ကျော်လွန်ပြီး လုပ်ဆောင်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ပါ။ ၈။ ဆန္ဒရှိတာတွေကို လျော့ချပြီး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေသတ်မှတ်ပါ။ လက်တွေ့ဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ပါ။ ၉။ အချိန်ဆွဲခြင်းများကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။ […]
သင့်ရဲ့အကျင့်က သင့်အောင်မြင်မှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးတယ်(ဆင်းရဲသားလေးတစ်ယောက်အကြောင်း)
ဟိုး တစ်ချိန်က အရမ်းကို ဆင်းရဲတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်… သူ့ကို အရမ်းချမ်းသာတဲ့လူတစ်ယောက်ကတွေ့တော့ သနားပြီး သူ့ကိိုု ကြီးပွားလာအောင် ကူညီချင်စိတ်တွေပေါ်လာတယ်… သူဌေးက သူ့ကို နွားတစ်ကောင်လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်… သူ့ကို လယ်ယာထွန်ယက်ဖို့ သေချာမှာခဲ့တယ်… အခုချိန်မျိုးစေ့ ကြဲထားပြီး ကောင်းကောင်းထွန်ယက်ရင် ဒီနှစ်ကုန်ရင် ဆင်းရဲတယ် ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ ဝေးဝေးခွာနိုင်တော့မှာပါလို့ ပြောခဲ့တယ်… ဒီသူဆင်းရဲလေးကတော့ အစပိုင်းမှာ မျှော်လင့်ချက်အပြည့်နဲ့ တက်တက်ကြွကြွလုပ်ရှာတယ်… ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောက်မှ မကြာလိုက်ဘူး… နွားက မြက်စားတယ်… လူက ထမင်းစားတယ်…ဖြတ်သန်းရတဲ့ဘဝက […]
အိပ်တဲ့အခါမှာ ဆံပင်ချပြီးအိပ်ရင် ဆံပင်တွေရှုပ်တယ်ဆိုပြီး စည်းအိပ်ကြတာမျိုးရှိပါတယ်။ ဒီလိုဆံပင်စည်းအိပ်တာက တစ်ရက်ဆိုတစ်ရက် ဆံပင်ပျက်စီးတာ အရမ်းသိသာပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိပ်တဲ့အခါမှာ ဆံပင်စည်းပြီးမအိပ်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်တွေကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆံပင်ကျွတ်စေတယ် ဆံပင်စည်းပြီးအိပ်ရင် ဆံပင်တွေကို အမြစ်ကကနေဆွဲထားသလိုဖြစ်တဲ့အတွက် ဆံပင်တွေကျွတ်လာစေပါတယ်။ ဆံပင်စည်းအိပ်ပြီး အိပ်ယာနိုးလို့ ခေါင်းဖြီးလိုက်ရင် ဆံပင်တွေအများကြီး ကျွတ်ပါလာတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဆံသားပျက်စီးစေတယ် ဆံပင်စည်းပြီးအိပ်ရင် ဆံပင်ကျွတ်တဲ့အတွက် ဆံသားတွေလည်း တဖြေးဖြေးနဲ့ပျက်စီးလာမယ်။ အဓိကကတော့ ဆံပင်အောက်ဖျားတွေဖွာပြီး၊ ကျိုးကြေသလိုတွေ ဖြစ်လာမယ်။ အောက်ဖျားတွေအရမ်းပျက်စီးလာမယ်။ ဆံသားခြောက်သွေ့လာပါမယ်။ […]
နာမည်မှာ“သ” ပါတဲ့သူတွေရဲ့ စိတ်နေသဘောထား
နာမည်မှာ “သ´´ ပါတဲ့သူတွေက စိတ်ကြီးတယ် ဒေါသဖြစ်လာရင် ဘယ်သူကိုမှဘယ်အရာကိုမှ ထည့်မစဉ်းစားဘူးထည့်လဲ မတွက်တတ်ဘူး ဒါပေမယ့် ပြောပီး လုပ်ပီးသွားလို့သူမှားနေတဲ့ကိစ္စကိုလဲပြန်တောင်းပန်ဖို့ ဝန်မလေးတတ်ကြဘူး။ စိတ်နာအောင်တော့ လာမလုပ်နဲ့သေတဲ့အထိ မှတ်ထားတတ်တယ် အငြိုးအတေးလဲ ကြီးတယ် အပေါ်ယံခင်မင်တာ မလိုလားဘူးသူငယ်ချင်း အစစ်ပဲ လိုချင်ကြတယ် ယောင်လို့တောင်နာမည်မှာ`သ´ပါတဲ့သူကို အရွဲ့မတိုက်မိစေနဲ့ သူများတွေ ရွဲ့တာထက်အဆပေါင်းများစွာ ပြန်ရွဲ့တတ်တယ်။ သနားအောင်ပြောလာရင်အိတ်ထဲရှိတဲ့ ပိုက်ဆံကိုယ် မသုံးရရင် နေပါစေပေးပြစ်တတ်တယ် မပေးချင်ဘူး ကြည့်မရဘူးဆိုရင် အဲ့လူဘာဖြစ်နေပါစေလှည့်ကို မကြည့်တော့ဘူး လိမ်တာ […]
မိဘတွေ အတင်းပေးစားလို့ ယူလိုက်ရတဲ့ ကျွန်မရဲ့ မင်္ဂလာဦးည
ဒီညက ကျွန်မရဲ့ မင်္ဂလာဦးည မိဘတွေ အတင်းပေးစားလို့ ယူခဲ့ရတာ ပြောရင်းဆိုရင်း သူအခန်းထဲ ဝင်လာပြီ ဒီညက ကျွန်မရဲ့ မင်္ဂလာဦးညဆိုပေမယ့် ကျွန်မ မပျော်ပါဘူး ဘာလို့လဲဆို မိဘတွေ အတင်းပေးစားလို့ ယူခဲ့ရတာဆိုတော့၊ သူနဲ့ကိုယ်ကလည်းအခုမှ မြင်ဘူး၊ တွေ့ဘူးတာ ဒါကြောင့်ကျွန်မ ကြောက်နေမိတယ် ပြောရင်းဆိုရင်း ဟော. သူအခန်းထဲ ဝင်လာပြီ ကျွန်မကို ဘာလုပ်တော့မှာလဲ ကျွန်မ ငိုချင်စိတ်ကို မနည်းထိန်းထားရတယ် ကျွန်မ ကြေ ာက်ပြီး […]
ၿမိဳ႕ေပၚေန မိသားစုေတြအတြက္ လွ်ပ္စစ္ထမင္းေပါင္းအိုးဟာ မရွိမျဖစ္ ေအရးပါတဲ့ အိမ္သုံးပစၥည္းတခုပါ။ အသုံးမ္ားသလို အပ်က္လည္းမ်ားၾကပါတယ္။ အခုတေခါက္မွာေတာ့သားခ်င္းတေယာက္ရဲ႕ တ႐ုတ္ထမင္းေပါင္အိုး (ေလးဘူးခ်က္)တလုံး ပ်က္ေနၿပီး အမႈိက္ထဲ ေရာက္မဲ့ ေပါင္းအိုးေလး ျပဳျပင္ပုံကို တင္ျပေပးပါမယ္။ေပါင္းအိုးျပစ္ခ်က္မ်ားကေတာ့ 1.Power supply မီးအဝင္ေခါင္း အရည္ေပ်ာ္ေနတယ္။ 2.ခလုတ္(check point) မၾကာခန တက္ေနတယ္။ ျပစ္ခ်က္ ၁ အတြက္ ေအာက္ခံ ေႂကြသားပါတဲ့ မီးအဝင္ေခါင္း ေဆာ့ကက္ အထိုင္ကို လွ်ပ္စစ္အပိုပစၥည္းဆိုင္ေတြမွာ ၅၀၀ိ/-နဲ႔ […]